08 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 8 2013
08 / 05 / 2013 Levent Ozen 1
တူရကီများသည်လစ်ဗျားရှိရထားလမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မည်ဖြစ်သည်။ လစ်ဗျားအစိုးရမီးရထားလမ်းမှတည်ထောင်ထားသော Express Train ကုမ္ပဏီသည် Kocaeli ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပူးတွဲရထားလမ်းစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ Yocı Tek Çelik Sanayi, Kocaeli စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၌လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခြင်း [ပို ... ]
အေး Ray အတွက်တစ်သက်တာ: တစ်ပုံပြင်၏ Demiryolc
ချမ်းသံသံလမ်းအချိန်ပိုရဲ့ start အကြားပုဒ်ပေါ်မှာအအေးနေ့၌အရုဏ်မှာတစ်ဦးကတစ်သက်တာနံနက်။ ညဦးယံအချိန်တစ်ဦးချင်းစီ 20 ကီလိုမီတာနေ့က-ဖြစ်ပါတယ်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေးကိုသွားတက်ရောက်လေ၏။ ရထားလမ်းအများအပြားဒေသများရှိလမ်းကြောင်း၏ 10-15 ကီလိုမီတာကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပ်နှင်းထားပါသည်။ နေ့ရက်တိုင်း၏တာဝန် [ပို ... ]
08 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့မီးရထားနှင့်ဗဟိုအာရှဆက်သွယ်နေကြသည်: အာရှအလယ်ပိုင်း Berdimuhamedov နှင့်အတူတာ့ခ်မင်နစ္စတန်ကသမ္မတ Gurbanguly ခါဇါနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့် Nursultan Nazarbayev များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်မြောက်ကိုရီးယားအဘိဓါန် South မီးရထားစီမံကိန်း, ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမေလ 11 ဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman: မီးရထား၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကပိုမျှော်လင့်ကြည့်ဘဝမှကယျတငျ (photo gallery)
08 / 05 / 2013 Levent Ozen 2
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, ထိုမီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင် (REMA) 11 ။ ဒါဟာအထွေထွေမန်နေဂျာရဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအရေးပါတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Karaman, အစ္စတန်ဘူလ်ရှိအဘို့သန့်ရှင်းသောပြည်သို့ဘဂ္ဂဒက်အတွက်ချဲ့ရန်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များနှင့် Anatolia ကနေလူမျိုး built [ပို ... ]
10-13 xnumx ။ ရဲ့ Karaman တူရကီဘာသာစကားများနေ့, မေလအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့် Izmir အတွက်တူရကီရထား၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တူရကီရထား Afyon နှင့် Konya ချိုးပါလိမ့်မယ်။ Karaman အတွက်တူရကီဘာသာစကားများနေ့, တာကရထား "ဘာသာစကားများတူရကီဝတ္ထု, ကဗျာဘာသာစကားကို [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Metro မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး)
Metro မော်တော်ယာဉ်အစ္စတန်ဘူလ် Metropolitan စည်ပင်သာယာရထားလမ်း SYSTEM ဌာနတူရကီဘက်ခြမ်းရထားလမ်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲရေးÜsküdar-Ümraniye-Çekmeköyရထားပို့ဆောင်ရေးပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ 126 အရေအတွက်မြေအောက် Tool ကိုထောက်ပံ့ရေးနှင့်ကော်မရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဧည့်ခံ 4734 ပြည်သူ့ရေတွက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများ Metro နှင့်ရထားစနစ်များနှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်မည်မှ
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့်ရထားအသွားအလာပြဿနာများဟာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, စနစ်များကိုမှဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်ထိုပြဿနာကို minimize လုပ်ဖို့အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro နှင့်အလင်းရထားလမ်းအသွားအလာပြဿနာနှင့်အတူဖြေရှင်းခံရဖို့။ နှစ်ပေါင်းအဘို့, အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာ [ပို ... ]
İZBANအကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Award ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်
İZBANသည့်မြူနီစီပယ်နှင့် 50 သြဂုတ်လ 30 နှင့်အတူ TCDD ရာခိုင်နှုန်းကို 2010 မိတ်ဖက်အားဖြင့်သာတည်ခရီးစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတကာဆီသို့ဦးတည်သည်၎င်း၏ခရီးတွင် "စာနာထောက်ထားရေးနှင့် Synergy များအတွက် Izmir" İZBAN Pre-စစ်ဆင်ရေးစတင်အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆုကို Izmir တဲ့ Metropolitan ချီးမြှင့်ခဲ့သည် [ပို ... ]
RayHaber 08.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
pinbrazing cihazı alımı işi Köprü Aydınlatılmasının Yenilenmesi İşi (Fırat Karakaya Demiryolu Köprüsü) Afyonkarahisar Loko Bakım Atölyesinin Tadilatı İşi Köprü ve Menfezlerde Bakım Onarım İşleri Yaptırılacaktır Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 02.01.2013 လေလံ [ပို ... ]
ရထားစီးနင်းမှုကြောင့်အလုပ်သို့သွားသောမိန်းကလေးငယ်သည်မနီလာမြို့ရှိမနက်ခင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အိမ်မှထွက်ခွာလာသည့်မိန်းကလေးငယ်သည်ရထားထိမှန်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ Berivan Sönmez (20) သည် 50၊ Horozköyခရိုင်ရှိအထည်အလိပ်စက်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
လုပ်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတူရကီတင်ပို့သူများညီလာခံ (TIM) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်Bülent Aymen, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုသစ်ကိုရထားလမ်းဥပဒတူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာပါလိမ့်မယ် အကယ်. တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများပြုပါလိမ့်မယ်, ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မယ်။ မီးရထားသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ, [ပို ... ]
Kahramanmaras TRAMBUS စီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု (ဗီဒီယို) ဆက်လက်
Kahramanmaras TRAMBUS စီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Kahramanmaras မြို့တော်ဝန် Mustafa Poyraz ဆက်လက်သူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသစ်နှင့်အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းများရှာနေငါတို့မွို့ရှိကြ၏ဟုပြောသည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားမှု၏တင်ပြချက်မှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Kahramanmaras မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ 11 ဘတ်စ်ကားလက်ခံရရှိ, [ပို ... ]
THE, မူးယစ်ဆေးဝါးဖွဲ့စည်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကျန်းမာရေးများကြောင့် ... THE LINE DINAR-Bozanönü Station နဲ့ ISPARTA-Bozanönüအကြား TCDD ရထားလမ်းလိုင်းများ ALSANCAK EĞİRDİRအတွက် fumigation သတိပေးပြုရမည် OT Medical ပြဿနာကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတိုင်းအတာအကြား LINE 8-9-10 မေ 2013 လုပ်ခဲ့တယ် [ပို ... ]
3 ။ တံတားများနှင့်မေလတွင် 29 မတိုင်မီယူခံရဖို့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများအတွက်လက်မှတ်
ဒါဟာတူညီတဲ့နေ့စွဲဘို့စီစဉ်ထားအခမ်းအနား groundbreaking အစ္စတန်ဘူလ် 29 အတွက်ယခုနှစ်မေလအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်၏သိမျးပိုကျသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် 29 ကြောင့်တံတားနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမနူးညံ့3နေ့ရက်ကာလအဘို့လက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီယူနိုင်ပါသည်။ တံတားစီမံကိန်းအားသေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီမဟုတ် [ပို ... ]
Marmaray နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား2500 တထောင်ရွက်လှေ Marina built ပါလိမ့်မည်
Marmaray နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်2တထောင် 500 ရွက်လှေ Marina Bayramoğlu2တထောင် 500 ရွက်လှေများစွမ်းရည်၏ဟောင်းများကိုတိုင်းပြည်အစ္စတန်ဘူလ် (နွေရာသီ) ကိုတည်ဆောက်ပါလိမ့်မည်လေ့, တူရကီအကြီးဆုံး Marina တဦးကယနေ့ Bayramoglu တည်လိမ့်မည်ဖြစ်၏ Kocaeli Darica ခရိုင်တစ်ဦးအပေါ်မူတည် [ပို ... ]
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအမြဲတမ်းလုပ်သားများ 150 ပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ 150 အမြဲတမ်းအလုပျသမားဦးစီးဌာန၏လိမ့်မည် Eskisehir အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ (Teo), စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည် TULOMSAS 24 မော်တော်ယာဉ်, 10 အရင်းအမြစ်,4ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ,2အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာရှင်, 24 လျှပ်စစ်, 68 ဆိုလိုသည်မှာ extension ကိုမာစတာ,2သန့်ရှင်းဖို့ [ပို ... ]
Railwaymen ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ railwaymen Start အချင်းချင်း Malatya ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပြည်နယ်မီးရထား (FDI) Malatya5။ ဝန်ထမ်းအကြားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကျင်းပခဲ့သောပြိုင်ပွဲအားဖြင့်ပြဿနာအပေါ်ရေးသားထားသောကြေညာချက်တွင်ဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး (TÜDEMSAŞ) ဝယ်ယူမှုရကြလိမ့်မည်
ပေးချေထားသည့်သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးလိမ့်မည်တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC (TÜDEMSAŞ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 55419 1 - ထိုအုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 346 225 18 18 / 4699-4683 [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ပစ္စည်းများဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
Sivas xnumx.bölgအဆင့် Crossing ပစ္စည်းများ TCDD ညွှန်ကြားမှု Entity4ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲအပိုဒ် 1- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာများ SUBJECT ကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: Sivas မှ TCDD xnumx.bölg [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အသင့်ဖြစ်ပြီလားသံမဏိ Seletar လိမ့်မည် Get
TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူး2.BÖLGအဆငျသငျ့သံမဏိ Seletar ကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုတင်ဒါမပါလိမ့်မယ်နှင့်ဆက်စပ် Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီးရယူပါ။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်2.BÖLG [ပို ... ]